‘राज्यलाई महिला क्रिकेटर छन् भन्ने थाहा नै छैन’ |
‘राज्यलाई महिला क्रिकेटर छन् भन्ने थाहा नै छैन’
प्रकाशित मिति :2018-05-06 11:08:00
महिला क्रिकेट राष्ट्रिय टिमकी कप्तान रुविना क्षेत्री राज्यको वेवास्ताका कारण क्रिकेटर महिलाहरु पलायन हुने क्रम बढेको बताउँछिन् । देशको प्रतिनिधित्व गरेर खेल खेल्न जाँदा समेत परिवारसँग हात थाप्नुपर्ने, स्पोन्सर खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनी बताउँछिन् ।
नेपालमा क्रिकेटर महिलाको अवस्था, उनीहरुप्रति राज्यले गरेको लगानी र क्रिकेटर महिलाको विकासका लागि गर्नुपर्ने प्रयासका बारेमा कप्तान क्षेत्रीसँग महिला खबरका लागि सन्दीप विकले गर्नुभएको कुराकानीः
तपाईहरु अब कुन प्रतियोगिता खेल्दै हुनुहुन्छ ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा हामी आइसीसीले इम्प्रुभ गरेको गेम मात्रै खेल्छौ । भारतको चण्डीगढमा आगामी मे २१ तारिखदेखि २५ तारिखसम्म हुने शहीद भगतसिंह अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि पत्र आएको छ ।
आयोजकले पत्र नेपाल नै भनेर पठाएको छ । व्यक्तिगत भनेर पठाएको छैन, हुँदैन पनि । अहिले त्यो टुर्नामेन्ट इन्टरनेशनल नै हो । श्रीलंका, बंगलादेश, भारत, नेपाल गरेर पाँच देश सहभागी हुँदैछन् । आयोजकले बस्ने, खाने र पोशाक पनि दिन्छौ, तर यातायात खर्च तपाईंहरूले व्यहोर्नु पर्छ भनेका छन् ।
कस्तो हुन्छ भने यातायातको खर्च गरेर समस्या त हुँदैन । तर यो जिम्मेवारी त सरकारको हो । व्यक्तिगत खर्च गरेर कति टुर्नामेन्ट भ्याउने खेलाडीले ? खेलाडीहरू कोही काठमाडौंमा छन्, कोही नेपालगञ्जमा छन् । देशभित्रै आवत जावत गर्दा एक जनाको कम्तिमा १५/१६ हजार खर्च हुन्छ । उनीहरू जागिरे पनि होइनन् ।
महिलाहरूलाई यत्रो रकम खर्च गर्न समस्या हुन्छ । त्यति रकम इन्भेष्ट गर्न समस्या हुन्छ । केही रकम त परिवारले गर्न सक्ला तर सबै सक्दैनन् । सबैको परिवार सर्पोर्ट गर्ने खालको पनि हुँदैन । सरकारले केही गरेको छैन, तिमीहरू किन खेल्छौ भनेर घरबाट प्रेसर आइरहेको हुन्छ । यस्तो दुःख देख्दा घरपरिवारले नजा, न खेल भन्छन् ।
भारतमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी हुँदैछौं भनेर कहाँ कहाँ जानकारी गराउनुभयो त ?
मैले खेलकुद परिषदमा चिठी त छोडेको थिए । तर त्यहाँबाट लामो समयपछि मात्रै प्रतिक्रिया आएको छ । हामी कसैले केही सहयोग नगरे पनि आफैँ खर्च गरेर भए पनि जान्छाै‌ । तर हामी नेपालको प्रतिनिधि हो भन्ने कुराको सरकारलाई किन हेक्का नभएको होला ? दुःख लाग्छ नी हामीलाई पनि ।
पैसाको अभावले त्यति राम्रो प्रतियोगितामा सहभागी हुन सकेनौं भने त घाटा राज्यलाई नै हो । हामीलाई कति गेमहरुमा खेल्न यातायात खर्च जुटाउनै समस्या हुने गर्दछ । यस्तो हेर्दा त राज्यलाई महिला क्रिकेटर पनि छन् भन्ने कुराको हेक्का नै नभएको जस्तो लाग्छ ।
गेमहरुमा सहभागि हुनका लागि हामीलाई लगभग एक/डेढ लाख रुपैयाँ जति लाग्छ । कहाँबाट ल्याउने तेत्रो पैसा । यातायातमै ८० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो रकम हामी खेलाडीले आफै खर्च गर्न सक्दैनौं ।
यसअघि पनि हामी आफै खर्च उठाएर बंगलादेश गएका थियौं । जसरी भए पनि हामी गयौं । अब नेपालबाट जाँदैछौ भनेपछि जसरी पनि सरकारले, सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनु पर्ने हो । क्रिकेटर महिलाहरूको हौसलाका लागि यातायात खर्च मात्रै भए पनि उपलब्ध गर्नुपर्ने हो । जब सरकार छ । खेलकुद परिषद् छ । खेलकुदका नाममा फरक फरक ठाउँमा खर्च गर्दा भइरहेको छ भने क्रिकेटर महिलाहरूको विकास र देशको नाम राख्नुपर्ने ठाउँमा किन लगानी नहुने ?
महिला त्रिकेटरको अवस्था कस्तो छ ?
सरकारले तलबको व्यवस्था गरेको छैन । यस्ता प्रतियोगिताहरू आउँछन् । देख्दा त दुई÷तीन हजार पनि खर्च गर्न सक्दैनौ भनेजस्तो हुन्छ होला । तर घरबाट मागेर कति दिन खेलमा सहभागी हुने ?
घरबाट निस्कियो भने थोरै थोरै खर्च गर्दा पनि धेरै खर्च हुन्छ । नेपालबाटै प्रतिनिधित्व गर्न लाग्दा त सरकारले सरकार हुनुको महसुस गराउनु पर्ने हो । तर विडम्वना हामी आफै स्पोन्सर र पैसा खोज्नुपर्ने बाध्यता छ । देशलाई चिनाउने उच्च इच्छा पनि सरकारको वेवास्ताले मर्छ की भन्ने डर ।
कुनै खेलमा जानु पर्दा घरबाट पैसा माग्नुपर्ने अवस्था छ । उहाँहरूले खेल खेल्न छोडेर विदेश जा भन्नुहुन्छ । कसैले विहे गर भन्नुहुन्छ । कसैले जागिर खाएर बस भन्नुहुन्छ । क्रिकेट खेल्न थाले पछि शुरु भएको आर्थिक अभाव कहिल्यै पुर्ती नहुने जस्तै भो । त्यो पनि देशको पहिचान बनाउने कुरामा लागेका कारण ।
आफ्नै देशले खेलाडीलाई राख्न सक्दैन, तलब दिन सक्दैन भने खेलाडीहरू त्यसै बिलाएर जान्छन् । त्यसो हुँदा हाम्रा ३÷४ जना क्रिकेटर महिलाहरू विदेश गइसक्नु भएको छ । फेरि अरु पनि विदेशीने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
क्रिकेटर महिलाहरूप्रति राज्यको यस्तै वेवास्था रहिरह्यो भने नेपालमा क्रिकेटर महिला पनि छन् र भन्दै टर्च बालेर खोज्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
सन् २०१० को क्रिकेटर महिलाको नामलिस्ट र अहिलेको नाम लिष्ट हेर्दा धेरै फरक छ । जब सिनियरलाई नै राजयबाट आवश्यक सेवा सुविधा दिइदैन भने नयाँ खेलाडीहरू कसरी आउँछन् ? के आधारमा उनीहरूलाई हामीले क्रिकेट खेल भन्नु । यी र यस्ता समस्याका बाबजुद पनि महिला त्रिकेट खेलाडीहरू खेलिराखेको अवस्था छ ।
क्रिकेटर महिलालाई सरकारले वेवास्ता गरेकै हो त ?
हो, दुई मतै छैन । सरकारले कत्ति पनि ध्यान दिएको छैन हामीप्रति । सरकारले खेलाडीलाई जोगाएर राख्नु पर्छ, तनावमा होइन । अर्को कुरा खेलप्रति उनीहरूको जोस र जाँगर हराउन नदिनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई तलवको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
१० वर्ष देखि हामी क्रिकेटमै समर्पित छौँ । महिला भएका कारण कुनै छुट्टै खालका सेवा सुविधा चाहियो पनि भनेका छैनौं । खेलमा आवश्यक कुराहरू उपलब्ध गराउ भन्दा पनि सरकारले वास्ता गर्ने । हरेक पटक प्रतियोगितामा सहभागी हुनुपर्ने भो भने कसरी राम्रो खेल प्रदर्शन गर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा दाता खोज्न मै ठिक्क हुनुपर्ने बाध्यता ।
हामीलाई सानोसानो कुराले गर्दा समस्या छ । आफै स्पोन्सर खोज्नुपर्ने, गेम खेल्नुपर्ने, देशको लागि पनि सोच्नुपर्ने बाध्यताले तनावै तनाव झेल्नु पर्ने अवस्था छ ।
तपार्इं महिला क्रिकेट राष्ट्रिय टिमकी कप्तान हुनुहुन्छ ? सरकारको सहयोगमा रहेमा टिमलाई कस्तो बनाउने लक्ष्य छ ?
सरकारले यातायात र क्याम्पमा सहयोग गरेमा जुनसुकै टुर्नामेन्टमा हामी राम्रो गर्न सक्छौं भन्ने हिम्मत छ । सरकारले ध्यान दिए हामी जस्तो सुकै खेलमा पनि सफलता प्राप्त गर्नेछौ । सरकारले अवसर देओस्, हामीे परिणाममा सफलता दिनेछौं ।
नेपालमा क्रिकेट खेलाडी महिलाको संख्या कति होला ?
हरेक क्षेत्रमा हाम्रो टिम छ । ९ वटा क्षेत्र एफपीएफ गरेर १० वटा मै हाम्रो टिम छ । तर अहिले ४० जना पुर्‍याउन पनि समस्या छ । हामी त खेलिरहेका छौँ । तर क्रिकेटर महिला महिला भेट्टाउनै गाह्रो भइसक्यो । अब बाँकीका क्रिकेटर महिलाहरूलाई जोगाउने की भगाउने ? सरकारको हातमा छ ।